के हो हेमोफेलिया ? – United Reference Laboratory (URL) Pvt. Ltd.
डा. विशेष पौडेल, हेमाटोलोजिष्ट, सिभिल अस्पताल
रक्तसञ्चारका लागि रगतमा पाइने दुई तत्वहरु प्लेटलेट्स र क्लटिङ फ्याक्टरको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । रगतभित्र रगतलाई जम्न मद्धत गर्ने प्रोटिन हुन्छ, जसलाई क्लटिङ फ्याक्टर भनिन्छ । शरिरबाट रक्तस्राव हुने वित्तिकै त्यसलाई रोक्ने काम प्लेटलेट्सले गर्छ । त्यसपछि दीर्घकालिन रुपमा रगत बग्न रोक्ने काम ‘क्लटिङ फ्याक्टर’को हो । क्लटिङ फ्याक्टरलाई १, २, ३, गरेर १३ सम्मको नाम दिइएको हुन्छ । क्लटिङ फ्याक्टरलाई ० देखि १ सय ५० प्रतिशतको रुपमा गणना गरिन्छ । यसलाई फ्याक्टरको एक्टिभिटी पनि भनिन्छ ।
क्लटिङ फ्याक्टर ८ र ९ मा आउने समस्यालाई मात्रै हेमोफेलिया भनिन्छ । अरु फ्याक्टरको कमीले समस्या देखियो भने त्यसलाई ‘रेयर ब्लिडिङ डिसअर्डर’ भनिन्छ । हामीकहाँ फ्याक्टर ३, ७ वा १३ को कमी भएको बिरामी पनि हुनुहुन्छ । यस्तो समस्यालाई भने हामी हेमोफेलिया भन्दैनौ ।
विभिन्न प्रकारका क्लटिङ फ्याक्टरमध्ये, फ्याक्टर ८ र ९ को शरिरमा कमी भयो भने हामी त्यसलाई हेमोफेलिया भन्छौं । फ्याक्टर ८ वा ९ मध्ये कुनैको कमी भएपनि हेमोफेलिया हुन्छ । हेमोफेलियालाई ३ भागमा विभाजन गरेर हेरिन्छ, माइल्ड,मोडरेट र सिभियर ।
Previous Article यसरी छाड्नुस् अम्मल
Next Article प्रेम वा विवाह असफल भए के गर्ने ?